Agnes Mahomva Archives – Nehanda Radio
COVID-19 third wave panic hits Zim
Jun 1, 2021 38,998
Health experts yesterday warned of a dire situation ahead as the third wave of COVID-19, which has reportedly hit the country in the face of threats posed by the South African and new Indian variants at a time when there are reports of a…
The authorisation of use and importation of Ivermectin — an anti-parasitic drug — to treat Covid-19 patients by the Government is primarily for investigative purposes and is an acceptable standard practice in medicine globally, a public…
Government warns against Covid-19 vaccine conspiracy theories
Jan 21, 2021 20,161
The public has been urged to ignore Covid-19 conspiracy theories alleging that vaccines against the deadly pandemic were not safe and meant to harm them.
Jan 17, 2021 36,063
Zimbabwe last week experienced its worst week with spiking Covid-19 infections and 200 deaths as the country continues to suffer the consequences of the second wave of the global pandemic.
Zim to get over 3m doses of Covid-19 vaccine
Jan 15, 2021 19,603
Zimbabwe is set to get over three million doses of vaccines at a cost of US$25 million from the 270 million jabs available to the African continent.
Dec 17, 2020 16,801
An investigation is underway after some people tried to use fake 48-hour Covid-19 certificates alledgedly issued by a Bulawayo laboratory to cross into South Africa through Beitbridge Border Post.
Nov 22, 2020 18,703
Zimbabwe re-opens Beitbridge border, only injiva, permit holders allowed
Oct 4, 2020 38,411
Zimbabwe has re-opened its side of the Beitbridge Border Post but to only allow Zimbabwean citizens in South Africa to return home.
Sep 20, 2020 36,702
The Government is still deliberating on whether to re-open its land borders, especially Beitbridge Border Post, to international travellers following an announcement by South Africa that it will re-open its ports of entry on 1 October.
Minister Parirenyatwa fails to break impasse
Jun 24, 2016 250
By Bridget Mananavire Health minister David Parirenyatwa has failed to break the impasse between private medical doctors and medical insurers — something that spells doom for Zimbabweans who will now be forced to pay cash up-front when…
Jul 4, 2022 21,360
Jul 4, 2022 36,025
Jul 4, 2022 22,807
Jul 4, 2022 42,452